I-Turmeric Yezinja: Ukudla, Ukupheka, Izinzuzo Zezempilo Nemiphumela emibi - Ezempilo
I-Turmeric Yezinja: Ukudla, Ukupheka, Izinzuzo Zezempilo Nemiphumela emibi
Uma ufuna ezinye izindlela zokwenza gcina inja yakho iphilile , kungenzeka ukuthi uhlangabezane nesitshalo esincane kodwa esinamandla se-turmeric.
Isinongo esaziwa ngezindawo zaso ezilwa namagciwane, i-turmeric yaqale yasetshenziselwa indima yayo ekwehliseni ukuvuvukala .
Kubhekwe njengokufanele ube nakho kumashalofu wabanikazi.
Ngizimisele ukufunda ukuthi ngabe lesi sipayisi singamsiza yini umngani wakho onemilenze emine?
Yebo, unenhlanhla! Sihlanganise umhlahlandlela wokugcina we-turmeric wezinja, kusuka ekusebenziseni kwayo, ukuthi ungayondla kanjani, imiphumela emibi kanye nezinzuzo zezempilo!
I-Turmeric Yezinja ... Kuyini?
Ngabe Izinja Zingadla I-Turmeric?
Ingabe iTurmeric Iphephile Ezinja?
Ungayinikeza Inja Kangakanani iTurmeric?
Indlela Yokwenza Namathisela I-Turmeric Yezinja
Ungakwenza Kanjani Ukuphatha Inja Ye-Turmeric
Izinzuzo ze-5 Zezempilo zeTurmeric Yezinja
5. I-Turmeric Isiza Izinja Ngomdlavuza
4. Ingasetshenziswa Njenge-Cyst Treatment Yezinja
3. I-Turmeric Isiza Izinja Nge-Arthritis
2. Isiza Amathumbu Ukuhlala Unempilo
1. Yi-Anti-Inflammatory Yemvelo
Imiphumela emibi Yokunikeza Izinja I-Turmeric
Ingabe iTurmeric Inobuthi Ngezinja
Ngingayithenga kuphi iTurmeric?
Ngabe Kufanele Nginikeze Inja Engakanani I-Turmeric?
I-Chew-Meric, i-Tum-eric noma i-Turmeric noma ngabe ukusho kanjani (futhi wonke umuntu ubonakala ekusho ngokuhlukile), upakisha konke okuhle!
I-Turmeric iyisitshalo esiqhakazayo, kepha yimpande esiyithanda kakhulu. Ingxenye yomndeni wejinja (ngokwesayensi eyaziwa ngokuthi i-curcuma isikhathi eside), ibukeka ifana kakhulu nejinja, kepha iphunga lizokusiza ukuthi utshele umehluko.
Lapho ibilisiwe, yomisiwe futhi igayiwe, inepepper efudumele, ebabayo, efana nokunambitheka nephunga elinjengesinaphi.
Okubaluleke kakhulu, turmeric has isakhi esisebenzayo esibizwa nge-curcumin okuletha izinzuzo eziningi zezinja ngezinja .
I-Turmeric isetshenziswa kakhulu kubantu ukusiza ngezifo nezimo ezahlukahlukene kubandakanya:
ICurcumin ikakhulukazi kuthiwa ilwa nokuvuvukala, i-antioxidant, i-anti-microbial, i-anti-tumor futhi iyasiza ekuphulukisweni kwesilonda.
Isetshenziswe ku-Ayurvedic futhi Imithi yamaShayina amakhulu eminyaka , manje isiyathola indawo kwi-Western Medicine.
Ngakho-ke kunengqondo ukuthi i-turmeric yezinja futhi iyicebo lokwelashwa elingaba khona lokugula okuningi (bheka ngezansi).
Ngenkathi iba nemiphumela engemihle, uma inikezwa ngendlela eyiyo nange-dosage turmeric kunezinzuzo eziningi zezempilo futhi ibekezelelwa kahle yizinja eziningi.
Yebo, i-turmeric iphephile ezinjeni.
I-Turmeric, kanye nesithako sayo esisebenzayo i-curcumin, sinokutholakala okungekuhle kakhulu. Lokhu kusho ukuthi ayingenisi kahle umzimba wenja.
Ibuye ibe nesilinganiso semetabolism ephezulu kanye nesilinganiso sokuqeda, okusho ukuthi ishiya umzimba wabo ngokushesha okukhulu.
Ngaleso sizathu, kutholakele ukuthi ingxenye enkulu, ukunikela ngezinja ezinamathiselwe ngegolide kunomphumela omuhle kakhulu ( bona iresiphi yethu ).
Ngefayela le- iresiphi yegolide yokunamathisela , kufanele uqale kancane nge-¼ tsp.
Uma nje kuyabekezelelwa futhi ubona izinzuzo zezempilo, ungakhuphula lokhu usuke phakathi kesipuni esisodwa kuya kwesithathu sesinamathisela ngosuku (ezinye izinja ezinkulu zingathatha u-3).
Lapho uqala ukwandisa inani le-turmeric yenja yakho, sasaza umthamo usuku lonke.
Kungcono ukwengeza inani elincane le-turmeric njalo ekudleni, kunokuba usebenzise umthamo owodwa omkhulu ekuseni.
½ indebe I-powder yomswakama
1 inkomishi Amanzi
⅓ indebe uwoyela kakhukhunathi ongahluziwe, ophilayo, obandayo
1 ½ tsp Upelepele omnyama
Faka i-turmeric namanzi epanini bese ubila emlilweni omncane imizuzu engu-7-10
Faka amanzi amaningi njengoba kudingeka ukuze wakhe ukuvumelana kokunamathisela
Susa ekushiseni bese wengeza uwoyela kakhukhunathi nopelepele omnyama
Vumela ukupholisa amahora amathathu
Ifakwe esiqandisini amasonto ama-2-3 noma iqhwa uma kudingeka
Uma inja yakho ingathandi ukunambitheka, ungathenga isikhunta sikabhontshisi wekhofi (lokhu kusebenza njenge-¼ tsp kabhontshisi ngamunye). Sakaza unamathisele ekubunjweni bese uqandisa.
Uma sekumisiwe, kuzikhiphe bese uthambisa ukudla okunenani eliphakeme (isb. Ibhotela lamantongomane) ngaphambi kokondla.
Ezinye izinja zingakha iphunga elifana ncamashi nekati lapho ziqala ukunamathisela, ungangeza isipuni esingu-1 somhlabathi iCeylon Cinnamon namafutha kakhukhunathi ukulwa nalokhu.
Uma inja yakho ingathokozile kakhulu kunamathisela, ngakho-ke ungenza futhi iqoqo lezinambuzane zokupheka kwezinja ezihlwabusayo .
2½ izinkomishi Ufulawa
½ indebe Amanzi
1 isipuni Imbewu yefilakisi
¼ indebe Amajikijolo aqoshiwe
1 isipuni Isiphepho
Bsp tbsp I-Peanut butter (i-xylitol mahhala)
2 tsp Uwoyela kakhukhunathi
Indlela Yokwenza Ukuphathwa Kwezinja ZeTurmeric:
Hlangisa i-ovini iye ku-350 deg F
Hlanganisa ufulawa namanzi uhlanganise
Faka iqanda, uwoyela kakhukhunathi, ibhotela lamantongomane, imbewu yefilakisi, ama-blueberries ne-turmeric uhlanganise kahle
Faka ufulawa owengeziwe noma inhlama njengoba kudingeka kuze kube kufana nenhlama
Gingqa inhlama uyisicaba bese wenza ubujamo bekhukhi
Bhaka imizuzu engama-25
Sebenzisa zingakapheli izinsuku ezi-5
Lokhu kuphathwa kwezinja akukuhle (ngokuya ngamakholori wokuqapha kanye nomthamo wangempela we-turmeric), ngakho-ke uma ufuna ukunikeza izinja i-turmeric njalo, kungcono ukunamathela ngokunamathisela kwegolide.
Ngakho-ke, sizwile ukuthi i-turmeric ingasiza ngezinkinga ezahlukahlukene zezempilo ezinjeni, kepha kanjani futhi ngani?
Yebo kuyasebenza. Asisho ukuthi yikhambi lomdlavuza, kepha ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi i-curcumin ihlangana kanjani namaseli womdlavuza nezicubu.
ICurcumin inqanda ukukhula komdlavuza njenge isebenza njenge-ejenti yokuvimba .
Ucwaningo lukhombise ukuthi i-curcumin icindezele ukukhula komdlavuza kumaseli enja, i-pituitary kanye ne-uterine. Okunye futhi okungakholekiyo ukuthi inekhono lokuzwisa amaseli ekhemotherapy; okwenza amaseli anomdlavuza asebenze kakhudlwana ekwelashweni okuvamile.
Ekugcineni, izindawo zayo zokulwa ne-antioxidant nazo siza ukuvimbela ukukhula komdlavuza ezinjeni .
Iphakethe lezicubu elenza uketshezi, ubomvu noma umoya laziwa njenge-cyst.
Izimuncagazi ngokuvamile zingaba imbangela yokwakheka kwe-cyst ezinjeni.
Izinja zisengozini yama-parasites futhi empeleni zimbozwe izinwele, zibeka engcupheni yama-cyst sebaceous (ezinweleni zezinwele). Izinja zesifazane zingakha ama-cysts ku izitho zabo zokuzala nazo.
Njengoba ama-cysts ngokuvamile abangelwa ukuvuvukala, ngakho-ke njenge-anti-inflammatory, i-turmeric ivame ukusetshenziselwa ukusiza ukuwaphatha.
Lokhu ukusetshenziswa okuvame kakhulu kunamathisela we-turmeric negolide.
Izimo zamathambo zivame ngokumangazayo ezinhlotsheni ezinkulu ngendlela yendololwane noma i-hip dysplasia.
I-osteoarthritis yisifo esiwohlozayo. Ukuvuvukala okungapheli kwamalunga okubangela ubuhlungu, ukuqina, ukuvuvukala nokugogeka.
Abanikazi abaningi bakhetha ukusebenzisa ukunamathisela kwe-turmeric yegolide njengokwelashwa kwesikhathi eside ukunciphisa izinhlungu nokuvuvukala.
Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi lapho zengezwa nge-turmeric, izinja ze-arthritic zikhombisa ukuthuthuka okuphawulekayo emsebenzini wazo wokuphila kwansuku zonke ngaphandle kwemiphumela emibi.
I-Turmeric isiza ukulinganisela umthwalo wegciwane ngaphakathi kwethumbu lenja, esebenza njenge-prebiotic yezinja .
Kusungulwe kahle ukuthi sidinga ukulinganisa amabhaktheriya amahle namabi emathunjini ethu. Lokhu kuyefana nakubangane bethu be-canine futhi, ikakhulukazi lapho befuna ngenkuthalo ukudla udoti noma ukudla okusendleleni yomgwaqo!
I-Turmeric nayo iyasebenza ekwelapheni isifo sokuvuvukala futhi .
I-Turmeric inezindawo ezinhle zokulwa nokuvuvukala.
Sesivele siyiphawulile imiphumela yayo elwa nokuvuvukala ezimeni zomdlavuza nesifo samathambo.
Izifundo ezengeziwe zibonisile i-curcumin (isakhi esisebenzayo ku-turmeric) sinenzuzo ekwehliseni ukuvuvukala ngemuva kokuhlinzwa.
Ngayo yonke imihlomulo le spice okufanele inikele ngayo, iza neminye imiphumela emibi engaba khona.
Ngenkathi i-turmeric ivame ukubekezelelwa kahle, ezinye izinja zinemiphumela emibi nge-turmeric, imvamisa ukugula nohudo .
Lokhu kuvame ukwenziwa ukwandisa umthamo ngokushesha okukhulu.
Uma inja yakho iqhubeka nokuba nokungahambi kahle kokugaya ukudla, ingahle ingalungeli bona.
Kukhona nokucatshangelwa kwezinja ezine-pancreatitis ukuphakelwa ukudla okunamafutha amancane.
Uwoyela kakhukhunathi (osetshenziselwa ukudala okunamathiselwe kwegolide), ngamanani amancane ngeke kubangele izingqinamba, kepha kufanelekile ukukukhumbula.
Ukucatshangelwa kokugcina, i-turmeric kucatshangwa ukuthi yi-anti-coagulant, ngakho-ke kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi kuyekwe ukwengezwa ngaphambi noma ngemuva kokuhlinzwa.
I-Turmeric iphephe ngokuphelele ukondla izinja ngamanani alinganisiwe. Ngokwaso lesi sinongo asikamunci kahle, ngakho-ke kungcono ukusimatanisa nezithako ezitholakala kokunamathiselwe kwegolide (bona iresiphi ngenhla).
Njenganoma yikuphi ukudla enenzuzo yezokwelapha yenja yakho , izithasiselo ze-turmeric ikakhulu azilawulwa.
Ngakho-ke kungcono kakhulu ukuthenga i-turmeric ngendlela yayo yasekuqaleni ezitolo zezempilo bese uzenzela okunamathiselwe ngegolide.
Qala ngokondla inja yakho nge-¼ tsp yegolide bese ukwengeza lokhu njengoba ikubekezelela. Khulisa isilinganiso sabo kuze kube yilapho ubona ukuthuthuka, kuze kufike ku-3 tsp yezinja ezinkulu ngosuku.
Sicabanga ukuthi uzovuma; lesi sitshalo esiqhakazayo sihlaba umxhwele.
I-Turmeric yaziwa ngezindawo zayo zokulwa nokuvuvukala, anti-microbial, anti-virus, anti-bacterial, anti-fungal, kanye ne-anti-cancer!
Izifundo eziningi ziye zancoma izinzuzo zayo, futhi yize sizitolika kubantu (njengoba izifundo zenziwa kakhulu ezilwaneni), kusobala ukuthi nathi singadlulisela izinzuzo ezinjeni zethu.
Abanikazi abaningi sebevele bazitholile izinzuzo, ikakhulukazi ezimeni zokuvuvukala njenge-arthritis ne-pancreatitis.
Ukusebenzisa i-turmeric ukwenza unamathiselo wegolide kungaletha izinzuzo ezinkulu enjeni yakho.
Njengenjwayelo, khuluma nodokotela wakho wezilwane ngaphambi kokungeza noma iziphi izengezo ekudleni kwenja yakho.
Ubuso obuyisicaba kodwa buhle? Kufanele ngithole iPug?
Ukuluma komdlwane onamasonto ayi-12
ukunakekela i-yorkie yetiye
isikhathi esimaphakathi sempumu yempumulo eluhlaza okwesibhakabhaka
i-labrador retriever kanye ne-german mix mix